Hoo Hana i Sheegin Aboowe - Dhacdooyinka bulshada - iftineducation.com
iftineducation.com – Dadka qaar waxay ka helaan inay is baraan labo qof labadaa qof diyaar ha u ahaadaan isbarasho ama dhinac kaliya diyaar ha u ahaadee, taas xisaabta uguma jirto. Qaar kale waxayba aamisan yihin ajar ayaan ka helayaa labo qof oon is baray ka dibna is guursaday,kuwo kale dabeecad bay ka noqotay inay isku doonaan wixii guur doon ahba.Waxayba noqdeen wakiilo loo soo dirsado arimahaa.Ma xuma inaad is barto dad,mana xuma hadeey is guursadaan.Waxaase dhibku ka taagan yahay hoo lambarka heblaayo hana u sheegin inaan anigu ku soo siiiyay! ,hoo emailka hana u sheegin inan anigu ku soo siiyay!. Waa kan sawirka heblaayo inaa ku tusayna ha u sheegin! Xaq miyaad u leedahay qof kale teleefonkiis, emailkiis , sawirkiis, iwm inaad iska siiso cid kale adoon ogaysiin qofkii lahaa.
Maxaa ka micno ah waa caadiye gabadhu soo guur doon maaha, soo guur uma joogto ? hadaan u soo tilmaamay cid guur ka rabta danteeda ayaan ka shaqeeyay ma anaa wax u dhimay! E-mail muxuu sheegaya ama teleefon la siiyo qof kale iyadu ha diido hadeey doonto ma anaa qasbaya waa xore. Waa la i waydiiyay ana waa siiyay caadiyoos ..
Ma is waydiisay markaa qof e-mailkii teleefonkii ,sawirkii iska siiso cidii ku waydiisa adoo ogolaansho ka qaadan qofkii lahaa ,markaa leedahay gacanta soo kuma haysid yuuna kaa lumin mar kale ha i soo waydiin!.ma is waydiisay inuu raali ka yahay qofkii lahaa? Ogolaansho maka qaadatay inaad siinayso cidii ku waydiisaba?markaase leedahay: Hoo hana u sheegi taas macnaheedu soo maaha inaad aaminsantahay inuusan qofkii raali ka ahayn ama aad adiguba qalad iyo waxaan wanaagsanayn sameynayso ,maxaad u leedahay hoo hana u sheegin hadaad u aragto wax caadi ah?.Waxaa taa ka daran kan ku leh iiga soo qaad inaan anigu rabana ha u sheegin! Ma kula quman tahay inaad naftaada u ogolaato inay sameyso wax qof walalkaa ah dhibsanayo ama uuna raaliba ka ahayn. Maxaase dhacaya hadaad tiraahdo cinwaankaaga la i waydiiyee raali maka tahay inan bixiyo?
W axaa laga yabaa in dad badani la yaabaan markeey maqlaan teleefon iska soo dhacaya, “Halloo ma heblaayaa, haa kumaad ahayd walaalow?” bal isku kay sheeg kuma garane?. Ima garanayside waa hebele ,waa wiil soomaaliyeede! Haye maxaa kuu darnaa? inaan is baranaa rabay!.,ma xuma isbarashadu waxayse ku haboonayd isagoo toos ugu yimaada gabadhaan uu doonayo una sheega dantiisa isagoon soo marin wadaadaas dheer hadana qaloocan. ama uu yiraahdo waa la i soo siiyay teleefonkaaga anaa ka dalbaday qofka i siiyay intuu oran lahaa kuuma sheegayo cida i siisay qasab maaha inaa ogaato waa sir! maxaa sir ah meeshu ma sirihii dowladahaa maxay tahay waxa sirta ah ee la qarinayaa mar hadaad qofkiiba la hadlayso danna ka leedahay maxaaba is qarin keenay maa runta la isku sheego si toosana loo wada hadlo.
Waxaan leeyahay qofka doonaya inuu is baro laba qof toos ha isu baro,,sidoo kale waxaa arin laga fican yahay ah inaad tiraahdo sawir iga soo qaad kadibna i tus qofkii sawirka lahaa oo aan ogayn,hadeey i cajabiso waan eegi doonaa hadii kalena kuma jiro.,,.waxaasoo dhan maaha dhaqamo fiican waxay ka dhigan tahay adoo dadka arimahooda gaarka ah dhex galaya. Waa dhaqamo dadka qaarkii caadeeysteen ,laakin ah dhaqamo foolxun kana fog ilbaxnimada.Waxaaba dhacdo in adigii daalac laguu raacdo oo lagu yiraahdo maxaa isla macaanaynaysaa ama isla xayeysiinaysaa maxaan sameeyay?waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta markaa balan kula galayso qofkii ku siisay cinwaanka isagii /iyadii aad ku balamaysaan afkeenu waa isku amaan isma arag isma maqal,waxba kuma siin ha u sheegin inaan ku siiyay ! ha u sheegin inaan anigu rabo! taas macnaheedu maxay tahay akhristahaan u daayay jawaabta
Waxaan ku soo koobayaa qofoowna ha siin cinwaan qof kale, qofkii lahaa oo raali ka ah mooyee ama aad u sheegtay in cinwaankiisa la rabo haduu ogolaado waa wax wanaagsan haduu diidana gadaashiisa haka siin.Sidoo kale qofoowna ha dalban cinwaan aan raali lagaaga ahayn ,waayo waa iska tuuganimo nooc kale ah,adigu ma jeclaan lahayd in: Kabo,buug,dhar, aad leedahay adoo ogolaansho lagaa qaadan walalkaaba ha noqdee uu iska siiyo qof kale waa maya, waayo waa wax adiga ku gaar ah mana jeclid in adoon ogayn sidii la rabo laga yeelo, hadaad cinwaankii wado qaldan ku soo heshay hadana haku sii indho adkaan inaad qariso qaabkaad ku soo heshay hana kula balamin cidna inaadan sheegayn meeshaad ka soo heshay. Hadiiba ay dhacdo in lagu waydiiyo hadaan lagu waydiinse waa xaalad kale.
Waxaa soo mara qofka bini’aadamka ah marxalado kala duwan noloshii + warbixin xasaasi ah